Devid Liuz oo ka cabsi qaba in aan loo kordhin doonin qandaraaska kooxdiisa. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Devid Liuz oo ka cabsi qaba in aan loo kordhin doonin qandaraaska...
Devid Liuz oo ka cabsi qaba in aan loo kordhin doonin qandaraaska kooxdiisa.
Mustaqbalka xidiga kooxda arsenal Devid Luiz ayaa sii dhamaanaya qandaraaska uu kula jiro kooxda reer landon waxaana macquul ah inuu isaga baxo arsenal. qandaraas xumo.
Daafaca dhexe ee brazil David Luiz ma uusan la yeelan wadahadalo qandaraas kordhin ah kooxda Arsenal wariye lagu magacaabo Chris Wheatley ayaa soo weriyey fursadaha uu ugu dambeyntii dib ula soo saxiixdo kooxda sidaas darteed weli lama hubo xitaa sida ay kooxaha kale soo jeedinayaan.
33 sano jirkaan ayaa laga yaabaa inuu faarujiyo gegada Landon stadium sidoo kale waxaa macquul ah in lasiiyo qandaraas cusub oo uu kula sii joogo Gunners waase la arki doonaa inuu baxo iyo in la siiyo qandaraas kordhin.
Previous articleLiverpool oo arkatay bedelka xidiga wadanka Holland Wijnaldum.
Next articleTababaraha RB Leipzig Julian Nagelsmann oo ka hadlay ciyaarta liverpool.